Education | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ Skip to main content
HomeElection 2015PartyNewsInfographicsNewsHealthEducationTechnologyEnvironmentTourismCrimeUpdate NewsBusinessLifeEntertainmentOpinionPoliticsRegionalSportsWorld NewsCartoonVideosSpecial Reports၂၀၁၆ လည်ပြန် You are hereHome » Section » Education
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံသစ်များ မကြာမီထုတ်ပြန်မည် Sun 23 Jul 2017 - 22:42 တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံများကို ယခုပညာသင် နှစ်ကစ၍ ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်နေ ပြီး မကြာမီ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဘာ သာရပ်အလိုက် မေးခွန်းပုံစံအ သစ်များနှင့် အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်း များကို ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် မိဘများသိရှိနိုင်ရန် မကြာမီ နိုင်ငံ ပိုင်သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်အသိပေးမည်ဟု ဆို သည်။
‘‘မေးခွန်းပုံစံအသစ်တွေကို ဝန်ကြီးရုံးနဲ့ အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်တွေကိုတင်ပြီး အ ကုန်လုံးသဘောထားတောင်းခံ ထားပါတယ်။ ပြောင်းမယ့် မေး ခွန်းပုံစံတွေကို တရားဝင်ကြိုအ ကြောင်းကြားမှာပါ။ အခုပဲ ကျောင်းဖွင့်တာ နှစ်လပြည့်တော့ မယ်ဆိုတော့ ကလေးတွေအ တွက် အခက်အခဲမရှိအောင်တော့ အချိန်မီလုပ်ပေးမှာပါ’’ဟု ဒေါက် တာသိန်းဝင်းက ပြောသည်။ စာသင်ဆောင်မလောက်င၍ ပထမနှစ် သင်တန်းသားများကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပင်မတွင်တက်ခွင့်မပြုတော့ Fri 21 Jul 2017 - 23:52 လာမည့် ဒီဇင်ဘာတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ်သင်တန်းသား များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မ ၌ တက်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ) ရှိစာ သင်ကျောင်းများတွင်သာ တက် ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဟု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက် တာဖိုးကောင်းကပြောသည်။ အစမ်းသပ်ခံ မဖြစ်စေရေး စောင့်ကြည့်ရန်လိုသော အုပ်စုဖွဲ့ စစ်ဆေးနည်း Wed 19 Jul 2017 - 13:16 ‘‘ကလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တတ်အောင်က တစ်ချက်၊ နောက် တစ်ချက်ကတော့ ကလေးတွေမှာ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူရှိတယ်။ ဉာဏ် ရည်နိမ့်တဲ့သူရှိတယ်။ ဉာဏ်ရည် မြင့်တဲ့သူနဲ့ ဉာဏ်ရည်နိမ့်တဲ့သူ ကြားမှာ ကွာဟချက် နည်းသွား အောင်၊ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူက ဉာဏ်ရည်နိမ့်တဲ့သူကို တွေးခေါ် မြော်မြင်တတ်မှုရှိလာဖို့တွဲခေါ်နိုင် အောင် ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေ နဲ့ Group Work စစ်ဆေးနည်းလုပ်တာပါ’’ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေးဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာခိုင်မြဲက ပြောသည်။
အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် အခန်းဆုံးစာမေးပွဲ စစ်ဆေး ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးများသို့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
ယခင်က အခန်းဆုံးစာမေး ပွဲများကို လစဉ်ကျင်းပကာ အဖြေ လွှာပေါ်တွင် တစ်ဦးချင်း ရေးဖြေ ဖြေဆိုစေပြီး အဆင့်သတ်မှတ် ချက်များကိုလည်း တစ်ဦးချင်း အ ရည်အသွေးအလိုက် Report Card ဖြင့် Grade A၊ B၊ C၊ D ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ရာမှ အခန်းဆုံးစာ မေးပွဲ စစ်ဆေးမှုပုံစံများကို ပြောင်း လဲရန် ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာ ပြန်တောင်းကြည့်သူ တစ်လအတွင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိ Thu 13 Jul 2017 - 20:44 ၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထွက်ပြီး တစ်လအတွင်း အဖြေလွှာ ပြန် လည်စစ်ဆေးပေးရန် လျှောက် လွှာတင်ထားသူ ၂၀၀ ကျော်ရှိ သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသိန်းဇံက ပြောကြား သည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူဖြစ်စေ၊ ကျရှုံးသူ ဖြစ်စေ ရလဒ်ကို သံသယရှိပါက အဖြေလွှာပြန်စစ်ပေးရန် မြန်မာ နိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန(လှိုင်တက္က သိုလ်နယ်မြေ)တွင် ဖြေဆိုသူ ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်)မိဘက တင်ပြနိုင်သည်ဟု ကြေညာထား ရာ ပြန်စစ်ပေးရန် လျှောက်ထား သူမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာပညာရေးအခွင့်အလမ်း ရွေးချယ်မှု မှန်ပါစေ Wed 12 Jul 2017 - 11:37 တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသားများအနေ ဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူရ တော့မည့်အချိန်တွင် ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များသာ မက ပြည်ပ၌ သွားရောက်ပညာ သင်ယူလိုသူများလည်း ရှိသည်။ ၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်များ စတင်ထုတ်ယူနိုင် Tue 11 Jul 2017 - 20:11 ၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်များကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက်မှစတင်၍ မြန်မာ နိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန (လှိုင်တက္က သိုလ်နယ်မြေ)ရှိ ဇွဲကပင်ဆောင် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်- ၅၂) တွင် ထုတ်ပေးနေကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသိန်းဇံက ပြောသည်။ ခြိမ်းခြောက်ခံလာရသော ရွှေ့ပြောင်းကလေးများ၏ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း Wed 05 Jul 2017 - 15:11 ‘‘စီမံချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးမှုတွေထဲမှာကျောင်းဆရာတစ်ဦးပါတယ်။ လိုက်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကျောင်းအုပ်တစ်ဦးကိုပါဖမ်းပြီး မြဝတီဘက်မှာ ပြန်သွန် (ပို့)ခံလိုက်ရတယ်’’ဟုရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံး အတွင်းရေးမှူး ဦးနိုင်နိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာခ့်ခရိုင်ရှိ မဲဆောက်အပါအ၀င် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင်အလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးလျက်ရှိရာ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာစာသင်ကျောင်းများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများပါ ဖမ်းဆီးခံရမှုများ ရှိနေသည်။
ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်းကလေးများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လှိုင်းသစ်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ဆရာတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရသည်။ ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့် ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူ ဆရာဦးဇော်ထက်က ရဲစခန်းသို့သွားရောက်မေးမြန်းရာ ၎င်းပါဖမ်းဆီးခံရပြီး နှစ်ဦးစလုံး မြ၀တီမြို့သို့ ပြန်ပို့(သွန်)ခံလိုက်ရသည်။ တက္ကသိုလ်တက်ရန် အခက်အခဲရှိသူများကို အစိုးရက ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးမည် Mon 03 Jul 2017 - 23:42 တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူ ရန် အခက်အခဲရှိသူများကို ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးပေးမည်ဟု အ ဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်အောင်မင်းက ပြောသည်။ မသန်စွမ်းအချို့ ပညာရေးကောလိပ်တက်ရောက်ခွင့် ငြင်းပယ်ခံရမှု စိစစ်ပေးရန် တောင်းဆို Mon 03 Jul 2017 - 22:00 ပညာရေးကောလိပ် တက်ရောက်ရန် နှုတ်ဖြေ၊လူတွေ့ စစ်ဆေးရာတွင် မသန်စွမ်းမှုကို အကြောင်းပြု၍ ငြင်းပယ်ခံရခြင်း အပေါ် ပြန်လည်စိစစ်ပေးရန် မြန် မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ အသင်း ချုပ်က ဇွန်လ ၃၀ ရက်၌ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စာပေးပို့တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့ သစ်မြို့နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး ကနီမြို့နယ်မှ မသန်စွမ်းသူနှစ်ဦးသည် ပညာရေးကောလိပ် ကဖွင့်လှစ်သော လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်း (PPTT) ဝင်ခွင့် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ သော်လည်း လူတွေ့နှုတ်ဖြေတွင် ပယ်ချခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြန်လည်စိ စစ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ နေ့စားလပေးဆရာ၊ ဆရာမအဖြစ် ခန့်ထားခဲ့သည့် မဟာဘွဲ့ရများအား ရာထူးတိုးပေးမည် Fri 30 Jun 2017 - 22:34 နေ့စားလပေးမူလတန်း ပြဆရာ၊ ဆရာမအဖြစ်အလုပ်ဝင် ရောက်ခဲ့သော မဟာဘွဲ့ရမူလ တန်းပြနှင့် အလယ်တန်းပြများ အားအလယ်တန်းပြနှင့် အထက် တန်းပြအဖြစ် ရာထူးတိုးခန့်ထား မည်ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ် တွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ အဆင့်တိုးဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကျောင်း သစ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့ ကြောင့်ဆရာ၊ဆရာမများ ထပ်မံ လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ရာထူးတိုးခန့် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြား ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ရမှတ် ၄၅၀ ရရှိပါက သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင် Fri 30 Jun 2017 - 22:33 ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့ နယ်ရှိ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (UIT) ဝင်ခွင့်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲတွင် ရမှတ်ပေါင်း ၄၅၀ နှင့် အထက်ရရှိပါက လျှောက်ထား နိုင်ကာ ကျောင်းသား ၂၀၀ လက်ခံမည်ဟု ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာစောစန္ဒာအေးက ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မည်သည့် စာစစ်ဌာနမှမဆို သင်္ချာ၊ ဓာတု ဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များ ပါဝင်သည့် ဘာသာတွဲတစ်ခုခု ဖြင့် အောင်မြင်သူများ လျှောက် ထားနိုင်သည်ဟု သိရသည်။ လျှောက်ထားသူ အဆမတန်များနေ၍ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ တိုးချဲ့မည် Wed 28 Jun 2017 - 12:32 လျှောက်ထားသူ အဆမတန်များနေ၍ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပညာရေးကောလိပ်များ တိုးချဲ့ရန်စီစဉ်နေကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော် ထွန်းကပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းဆွေနိုင်က နေ့စားလပေးမူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် ဝင်ခွင့်ဖြေ ဆိုစရာမလိုဘဲ ပညာရေးဘွဲ့ (B.Ed) နှင့် မူလတန်းကြို ဆရာ၊ ဆရာမသင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန်လ ၂၁ ရက်က ကျင်းပသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းစဉ် ဒုဝန်ကြီးက ထည့် သွင်းဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျခဲ့၍ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပင်ပန်းခက်ခဲစွာ ဆောင်ရွက်နေရဟု ပညာရေးဝန်ကြီးပြောကြား Wed 28 Jun 2017 - 12:31 နှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာရေးခေတ် နောက်ကျနေခဲ့သည့်အတွက် လို အပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ စိန် ခေါ်မှုများနှင့်် ကြုံတွေ့နေရပြီး ပ ညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပင်ပန်းခက်ခဲစွာ ဆောင်ရွက်နေရ ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုး သိမ်းကြီးကပြောသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမည့် အချိန် Wed 28 Jun 2017 - 12:29 တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင်ရောက်ဖြေ ဆိုခဲ့ရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပြီး အောင်ချက် ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲ အောင်မြင်သူများအနေဖြင့် မိမိဝါသနာပါရာ တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရန် လာမည့် ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို စတင် လျှောက်ထားရတော့မည် ဖြစ် သည်။
‘‘ဝင်ခွင့် ရွေးချယ်မှုကတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စိစစ်ရွေးချယ် ရေးအဖွဲ့ကလုပ်မှာပါ။ ဩဂုတ် ၁ ရက်မှာ ၀င်ခွင့်လမ်းညွှန်တွေစပေး မယ်။ လကုန်လောက်ထိ လျှောက် လွှာတွေကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းအ လိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာ လက်ခံပေးမယ်။ ပြီးရင် နိုဝင်ဘာလလောက် နောက်ဆုံး ထားပြီး ဝင်ခွင့်ပြန်ချပေးဖို့တော့ လျာထားတယ်’’လို့ အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးစောခိုင်ကပြောသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးသောင်းကျော် လိုအပ်နေ Tue 27 Jun 2017 - 18:17 ယခု ပညာသင်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများ၌ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၂,၂၆၃ ဦး လိုအပ်နေကြောင်း ဆရာအတတ်ပညာနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာမေစန်းရီက ဇွန်လ၂၄ ရက်တွင် ကျင်းပသော အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ ပြောသည်။
အခြေခံပညာကျောင်းများ တွင် အထက်တန်းပြ ၆,၄၆၉ ဦး၊ အလယ်တန်းပြ ၂၃,၉၀၀ ဦး၊ မူလတန်းပြ ၂၁,၈၉၄ ဦး လိုအပ် နေပြီး ယခုပညာသင်နှစ်၌ ဖွဲ့ စည်းပုံအရ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၁၃,၉၀၂ ဦး ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၃၇၀,၇၄၀ ဦးသာ ခန့်ထားနိုင်ရာ ၁၄၃,၁၆၂ ဦး လိုအပ်နေသည်။ မှန်ပန်းချီပညာရပ်ကို အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်တွင် သင်ရိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ရေး စီစဉ်နေ Sat 24 Jun 2017 - 23:22 ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မှန် ပန်းချီပညာရပ်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အမျိုးသားယဉ် ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်၌ သင်ရိုးတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်း နိုင်ရေးစီစဉ်နေကြောင်း မန္တလေး တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်နိုင်ဝင်းက ပြော သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်း သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်အဆိုကို လက်မခံဟု ဆရာ၊ ဆရာမများ ဝေဖန် Sat 24 Jun 2017 - 23:15 ကျောင်းအပ်စာရင်း သွင်းထားသော ကျောင်းသားများ အားလုံး ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင်များဖြစ်သည်ဟူသော အဆင့် မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်အောင်မင်း၏ အဆိုကို လက်မခံကြောင်း ဆရာ၊ ဆရာမ များက ဝေဖန်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂,၂၀၀ ဦးလက်ခံမည် Fri 23 Jun 2017 - 23:59 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဒီ ဇင်ဘာ၌ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့ကြိုပထမ နှစ်သင်တန်းများတွင် တစ်ဘာသာလျှင် ၁၀၀ ဦးဖြင့် ဘာသာရပ် ၂၂ ခုအတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂,၂၀၀ ဦးလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
‘‘ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတစ် ဘာသာစီကို ၁၀၀ ဦးခေါ်မယ်’’ ဟု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ချုပ်ဒေါက်တာဖိုးကောင်းကပြော ကြားသည်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် စာစဉ်အဖြေလွှာစာအုပ်များ မလောက်င၍ မိတ္တူဆွဲဖြေဆိုနေရ Fri 23 Jun 2017 - 19:08 တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဝေး သင်တက္ကသိုလ် ဌာနခွဲများတွင် စာစဉ်အဖြေလွှာစာအုပ်များမလုံ လောက်မှုကြောင့် အဖြေလွှာစာ အုပ်ကို မိတ္တူဆွဲ၍ ဖြေဆိုနေရ ကြောင်း အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအချို့ က ပြောသည်။
‘‘စာစဉ်က ဒီလကုန်နောက် ဆုံးတင်ရမှာ။ အဖြေလွှာစာအုပ် မရလို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကို တစ်ရွက်ပေးတယ်။ အဲဒါကို မိတ္တူဆွဲဖြေခိုင်းတယ်။ မနှစ်က လည်း အဲဒီလိုကြုံရတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ မရတဲ့ကျောင်းသား တော်တော်များတယ်’’ဟု မကွေးတက္ကသိုလ်အဝေးသင်ဌာနခွဲမှ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာဘာသာရပ် အောင်မြင်သူ မရှိ Wed 21 Jun 2017 - 13:37 ၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ဘာသာရပ် ဖြေဆိုသူ နှစ်ဦးရှိသော်လည်း အောင်မြင်သူတစ်ဦးမျှ မရှိဟု မြန် မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးညွန့်က ပြော ကြားသည်။ Pages123456789…next ›last » .
No.1514 Tuesday, July 25, 2017 မှော်ခရာ No.1513 Monday, July 24, 2017 No.1512 Sunday, July 23, 2017 No.1511 Saturday, July 22, 2017 No.1510 Friday, July 21, 2017 No.1509 Thursday, July 20, 2017 အတွဲ (၁၆)၊ အမှတ် (၁၉) No.1508 Wednesday, July 19, 2017 No.1507 Tuesday, July 18, 2017 Cartoon
Copyright © 2016. Developed by Information Matrix Digital Advertising Rates | Car Advertising Rates | Advertising Rate Sheet | Subscribe Newsletter | Search | Contact Us